Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ဘင်္ဂါလီ ၉၀ ကျော်ကို လဝက ဥပဒေဖြင့် စစ်ဆေး
“လ.ဝ.က က စစ်ဆေးပြီးမှ တရားရုံးတင် စစ်ဆေးမယ်။ ပြစ်မှု ထင်ရှားရင် အရေးယူသွားမယ်။ ပြီးမှ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံကို လွှဲမယ်” ဟု ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 17:13
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ဘင်္ဂါလီ ၉၀ ကျော်ကို လဝက ဥပဒေဖြင့် စစ်ဆေး . All Rights Reserved